တစ္ဆေ | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » တစ္ဆေ
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 3:52 PM
Posted by မိုးသက် at 3:52 PM Read more
နောက်ထပ် အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးပါဦးဗျ
မိုးသက် March 6, 2014 at 4:59 PM
Ma Tint March 6, 2014 at 6:40 PM
ရောက်ခဲ့တယ် မိုးသက်ရေ... အရင်က အခြောက်ခံရတာတွေ အခုချိန်မှာ ရယ်စရာဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီအခါတုန်းကတော့ ..... :P
ဘလော့မှာပို့စ်လေးတွေ ပြန်မြင်ရတာ အတော်လေးကျေနပ် ၀မ်းသာမိတာအမှန်ပါ။
မိုးသက် March 7, 2014 at 1:54 AM
ဟုတ်ကဲ့ အန်တီတင့် မကြာမကြာ ရေးဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်..။
Thu March 6, 2014 at 7:16 PM
ခုထိသရဲအခြောက်မခံဖူးသေးဘူး။ဘာသာရေးအရပြောမယ်ဆိုရင်..အမျှတောင်းဖို့သူတို့ကအသံပေး၊အနံ့ပေး၊အယောင်ပြကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။အမှန်ဆို.ဟိုဇာတ်ကားထဲကလိုအော်လိုက်ရမှာ အဘရေ အမျှ အမျှလို့ :P
အရေးအသားကတော့ ဆရာကျတယ်.. Thumb up (y)
မိုးသက် March 7, 2014 at 1:55 AM
မနေ့ညက ရေးနေရင်းကို ရှေ့က ခန်းဆီးစကြီးရှိနေတော့ စိတ်ထဲ ပြန်သတိရပြီး တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့.။
ဟန်ကြည် March 6, 2014 at 10:24 PM
ခပ်ငယ်ငယ်ကတော့ သရဲခြောက်တာ တစ်ခါခံရဖူးတယ်...ဆုံးသွားတဲ့ အဘွားလက်ချက်...အရွယ်လေးရောက်လာတော့ မကြုံတော့ပြန်ဘူး...ကိုယ်ကပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အာရုံမထားတာလား အသက်ရလာလို့ ထူသွားတာလားတော့မသိဘူး...ခြောက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ နေရာတွေကို ရောက်တာတောင် မကြုံတော့တာကလား...တော်သေးတာပေါ့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ သရဲမျက်နှာကြီး ပေါ်မလာတာ...း)
ဒုတ်ိယလူ March 11, 2014 at 7:14 AM
ကျနော်လဲ လမ်းဘေးသစ်ပင်က သရဲခေါ်ပြီးဖဲရိုက်ဖူးတယ် နိုင်ရင် အရက်နဲ့ ကြက်သားကျွေး
မယ်ဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ.မူးမူးနဲ့ ပေါက်ကရ လုပ်တာပေါ့.. အာ့ည ဖဲတစ်ကယ်နိုင်တယ်ဗျ
တစ်ဝိုင်းလုံးရှီသမျှပိုက်စံ ကျနော်အကုန်နိုင်တာ.. အနိုင်ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့
ထပ်မူးပြီး သ၇ဲံ့ ပြောထားတာတွေလဲ မေ့ကုန်ရော..နောက်ရက် .ကျတော့
ကျနော် နတ်ပူးသလိုသလို ဘီလူးစီးသလိုလို နဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်
ဖြစ်သွားပါလေရောလား.. ရွာက ဘိုးတော် က အာ့အကြောင်းတွေ
သိပြီး လမ်းဘေးသစ်ပင်က သရဲ သွားတောင်းပန်တော့မှ .ကျနော် လဲ
နေပြန်ကောင်းသွားတာ.......တစ်ကယ် အဖြစ်ပါဗျ အဲ့ညက ကျနော်နဲ့ အတူပါတဲ့
သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လဲ မကြောက်တက်ပါဘူး...... ဒါပေမယ့် .
နောာက်ရက်..တွေ ...>>အခုချိန်ထိလဲ အာ့သစ်ပင်ကြီးနားက ဖြတ်မသွားရဲ့တော့ဘူးလေ